Guddiga Qandaraasyadda Qaranka Oo Shaaciyay Shirkadda Ku Guulaysatay Dhismaha Xabsiga Gabiley | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Guddiga Qandaraasyadda Qaranka Oo Shaaciyay Shirkadda Ku Guulaysatay Dhismaha Xabsiga Gabiley
Published on July 31, 2018 by sdwo · No Comments
Hargaysa (SDWO): Guddiga qandaraasyadda qaranka Somaliland ayaa shaaciyay in shirkadda dhismaha ee Xaaji Muuse Contraction ay ku guulaysatay tartan loo galay dhismaha xabsi weyn oo laga dhisayo magaaladda Gabiley.
Tartankii la baahiyay ee dhismaha xabsiga Gabiley waxaa ka qayb qaatay 33 shirkadood, kadib markii guddiga qandaraasyadda qaranku kala hufeen shirkadahaasi waxaa isugu soo hadhay 9 shirkadood.
Iyadoo hada-na markii la sii kala shaandheeyay 9-kii shirkadood, ay liiskii kama-danbaysta ahaa isugu soo hadheen afar shirkadood oo kala ahaa Xaaji Muuse Contraction Company, Libaax Construction Company, Bilan Construction Company iyo Dileyta Construction Company.
Waxaanay shaaciyeen guddiga qandaraasyadda qaranku in markii la eegay dhamaanba shuruudihii looga baahnaa shirkadahaasi in shirkadda Xaaji Muuse Contraction Company ay ku guulaysatay dhismaha qandaraaska xabsiga dhexe ee Gabiley.
Munaasibad kooban oo lagu shaacinayay shirkadda ku guulaysatay dhismaha xabsigaasi oo maanta lagu qabtay xarunta guddiga qandaraasyadda qaranka ee magaaladda Hargaysa, waxaa goob joog ka ahaa guddoomiyaha guddiga qandaraasyadda, xubnaha gudigaasi, iyo masuuliyiin ka socday afartii shirkadood ee ku soo baxay liiskii kama-danbaysta ahaa.
Nuux Maxamed Xuseen, guddoomiyaha guddiga qandaraasyadda qaranka Somaliland ayaa halkaas kaga dhawaaqay shirkadda ku guulaysatay tartanka iyo sababta ay ku xusheen shirkadda guulaysatay.
Waxaanu yidhi “Tartankaasi waxaa liiskii kma-danbaysta ahaa isugu soo hadhay afart shirkadood ee kala ah Xaaji Muuse Contraction Company, Libaax Construction Company, Bilan Construction Company iyo Dileyta Construction Company.
Markii aanu soo eegnay qalabka 4-taas shirkadood, qiimayna ku samaynay, waxaa noo soo baxday in shirkadd Xaaji Muuse Contraction Company qalabkeedda, haddii uu yahay agabka ay haysato, haddii ay tahay waxyaabaha dhismaha ee ay haysato.
Iyadoo shirkadaasi haysata dhamaanba qalabkii loo baahnaa Looxii, Jiingadii, Jaajuurkii, Sibidhkii, Makiinadii Alxankii, gaadiidkii iyo dhamaanba waxyaabihii looga baahnaa shirkad dhisme, waxaanu ku qanacnay in hawshaasi ay ka bixi karayso, tartankiina ay ku guulaysatay shirkadda dhismaha ee Xaaji Muuse Contraction Company”.
“Shirkad kaloo intaas na tustay ma jirin. Sidaas ayaananu ugu dooranay, kuna heshay shirkadda Xaaji Muuse Contraction Company dhismaha xabsiga dhexe ee Gabiley. Maadaama saddexdii shirkadood ee kale qalabkaas aanay soo bandhigin.
Markaa waxaan leeyahay 3-dii shirkadood ee kale, nasiib wanaagsan ayaanu idiin rejaynaynaa, una hambalyeeya, uguna duceeya shirkadaa heshay”ayuu yidhi Nuux Maxamed Xuseen, guddoomiyaha guddiga qandaraasyadda qaranka ee Somaliland.
Geesta kale Kayse Xaaji Muuse, oo ku hadlayay afka shirkadda Xaaji Muuse Contraction Company, ee ku guulaysatay dhismaha jeelka weyn ee Gabiley ayaa u mahad celiyay guddiga qandaraasyadda qaranka Somaliland hanaanka cadaaladda ah ee ay ku shaqaynayaan.
Waxaanu sheegay in aanay weligood guddiga qandaraasyadda qaranka Somaliland kala kulmin cadaalad noocan oo kale ah, isla markaana ay ku faraxsan yihiin in ay ku guulaysteen tartankii la qabtay. Waxaanu yidhi “Beryihii hore waxaa dhici jirtay in aanay cadaalad sidan oo kale ahi jirin. Iyadoo shirkaddo boorso lagu sito ay ku guulaysan jireen qandaraasyadda noocan ah.
Nasiibkayaga ayaa na siiyay, cadaalad-na waa lagu kala saaray, si wanaagsan oo daah-furan-na waa loo qabtay kala saarista tartankii shirkadaha. Waanan ku faraxsanahay. Cadaalad ayuun baana dadka deeqda, cadaalad ayaana halkan ka dhacday”.
Dhinaca kale xubno ku hadlayay saddexdii shirkadood ee ka midka ahaa afartii shirkadood ee liiska kama danbaysta soo gaadhay, balse lagaga guulaystay tartankaasi ayaa dhinacoodda guddiga qandaraasyadda qaranka Somaliland ku amaanay habkii cadaalad ahaa ee ay u kala saareen shirkadihii tartankaas ka qayb galay.
Waxaanay shirkadda ku guulaysatay dhismaha xabsiga Gabiley laga dhisi doono ugu hambalyeeyay in ay ku guulaysato tartankaasi. Waxaanay sheegeen in guddiga qandaraasyadda qaranku ay muujiyeen cadaalad, oo ay ku tilmaameen in uu la mid ahaa nidaamyadda ay raacaan hay’adaha iyo shirkadaha caalamku.
“Arrintani waa mid ugub ah. nidaamka ay guddiga qandaraasyadu hanaanka ay u mareena wuxuu la mid yahay habka ay maraan ama isticmaalaan shirkadaha iyo hay’adaha caalamiga ah. waana sida laga doonayo in Somaliland nidaamkeedda loo marro, dadkana waxaa deeqda cadaalad. Saaxiib iyo xigto waxyaabahaasi ma deeqaan”.
“Guddiga qandaraasyadda waanu uga mahad naqaynaa, sida cadaaladda ah ee ay uga gar-naqeen 33-kii shirkadood ee ka qayb galay tartankaasi iyo shuruudihii lagu xidhay”.
“Qofkii ILLAAHAY (SWT) u qoray ayuun baa helay, si kastaba haku qaatee, xagga sare ayaanu arrimuhu ka qoran yihiin. Afartii shirkadood ee isku soo hadhayna ma wada guulaysteen, balse mid uunbaa heli lahayd. Shirkadaa heshayna, waa shirkad reer Somaliland ah, oo wadanka xaq ku leh”.
“Si cadaalad ah, oo xalaal ah ayay u dhacday qandaraaskii loogu tartamayay dhismaha jeelka weyn ee Gabiley, oo ay ku guulaysatay shirkadda Xaaji Muuse Construction Company. Waanan ugu hambalyaynaynaa.
Sidoo kale waxaan u hambalyaynayaa shirkadihii kale ee liiska kamadanbaysta ah isugu soo hadhay ee afarta ahaa. Sida walaaltinimadda leh, ee qiimaha leh, ee sharafta leh ugu hambalyeeyay shirkadda ku guulaysatay tartankaasi”.